Ingabe lobu ubuso obubi kunazo zonke lapho ukuguquguquka kwesimo sezulu kusikhombisa khona? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ingabe lobu ubuso obubi kakhulu bokuguquka kwesimo sezulu?
Sizwa kwabezindaba ukuthi zenzeka kanjani izehlakalo zesimo sezulu ezedlulele futhi ezilimazayo. Kuleli sonto eledlule, iSigaba sesi-5 iSiphepho u-Irma sihlasele iziqhingi zaseCaribbean naseFlorida, sishiya ngemuva izikhukhula ezinzima, inqwaba yokufa nezigidi zamakhaya ezilimele futhi ezingenawo ugesi. Lesi siphepho kube yisona esikhulu kunazo zonke ezirekhodiwe emanzini oLwandle i-Atlantic.
Ngaphezu kwalokho, ezinye izehlakalo ezimbi kakhulu njengesomiso esiningi, izikhukhula e-Italy, iziphepho ezishisayo, njll. Ingena ngemvume ngokuqhubekayo. Le yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu esilindele esikhathini esizayo, ikhula ngamandla futhi ibe namandla kakhulu. Ingabe lobu ubuso obubi kakhulu bokuguquka kwesimo sezulu?
U-Irma ufika ngemuva kweSiphepho uHarvey eningizimu ye-United States kanye nokucekelwa phansi kwesiphepho esinganakwa eSouth Asia, lokho kushiye abangaphezu kuka-1.200 XNUMX beshonile. Eduze, e-Italy, izimvula ezinamandla ezinkulu nazo zishiye abaningi beshonile. Khonamanjalo, ezweni lethu sifunda izihloko zezindaba ezifana nokuthi "iSpain ihlushwa isomiso esibi kakhulu eminyakeni engama-20 edlule" noma "Izinqolobane zaseSpain ziku-43% wamandla azo ".
Manje esinye isiphepho seSigaba 1 (iSiphepho uMaria) sizogadla futhi eCaribbean Islands. Isiphepho sesibili, uJosé, naso siyasebenza e-Atlantic futhi sibangele izixwayiso zesiphepho esishisayo enyakatho-mpumalanga ye-United States.
Ngabe ukushintsha kwesimo sezulu yikho konke lokhu? Ososayensi bebelokhu bexwayisa iminyaka eminingi ukuthi ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okubangelwa ukufudumala kwembulunga yonke kubangela ushintsho esimweni sezulu seplanethi imiphumela yaso ezimweni zezulu ezimbi kakhulu eqondile. Amandla amakhulu nokuvama kwesomiso, izikhukhula, iziphepho ezishisayo, izivunguvungu, njll.
Yize ithonya lokuguquka kwesimo sezulu kanye nemiphumela emibi kubantu isobala, izintshisekelo zezombusazwe nezomnotho ziyaqhubeka nokubekwa phambili esikhundleni sokuthatha isinyathelo ukuze sikuvimbe.
Kufanele kucaciswe ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu akuyona leyo edale ngqo iSiphepho u-Irma, noma iSiphepho uHarvey, kodwa kubenze baba namandla futhi kwakha amathuba amaningi eziphepho eziningi.
UDonald Trump, umongameli ophikisayo ezinyangeni ezedlule owashiya impi yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu wasusa iMelika eSivumelwaneni saseParis, umemezele iFlorida "njengendawo eyinhlekelele," kanti iHouston, eTexas, iyaqhubeka nokuqeda uzamcolo kaHarvey eminyakeni embalwa edlule. amasonto.
Kumele silwe nokushintshashintsha kwesimo sezulu futhi singaphikisi ukuthi ikhona noma cha, ngoba imiphumela yayo ingaphezulu kokusobala.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ingabe lobu ubuso obubi kakhulu bokuguquka kwesimo sezulu?
Ake sikhulume ngamagiza
Izici nobukhulu besiphepho uMaría